कला/साहित्य | Ramechhappost.com
Home » कला/साहित्य You are browsing entries filed in “कला/साहित्य”
धुर्मुसले यसरी गरे कृषिमन्त्री रोएको नक्कल (भिडियाेमा)
Posted in कला/साहित्य | Read More »
जाजरकोट, यहाँको टालेगाउँ गाविसमा पाइने पत्थर काइनाइट विश्वकै उच्च गुणस्तरमा परेको छ । विभिन्न स्थानमा पाइने नवरत्न पत्थरमध्ये टालेगाउँमा पाइने काइनाइट विश्वकै उच्च गुणस्तरमा पर्ने घरेलु साना उद्योग विकास समिति सुर्खेतका निर्देशक विनोददेव पन्तले जानकारी दिनुभयो । आठ हजार प्रकारका ढुङ्गामध्ये ८०० देखि एक हजार प्रकारका ढुङ्गामा रत्न पत्थर हुने निर्देशक पन्तले बताउनुभयो । […]
Posted in कला/साहित्य,प्रमुख समाचार | Read More »
सनसनी चर्चा एयरलिफ्टको
बलिउडमा जति चर्चा कमाउन सफल भयो चलचित्रले त्यति नै सफलता पाउछ भन्ने त भनाई नै छ । त्यस्तै चलचित्रको सुरुवातदेखि नै चर्चा कमाए सफल अक्षकुमारको चलीचत्र एयरलिफ्तले निकै चर्चा बटुल्न सफल भएको छ । जनवरी २२ देखि रिलिज भएको यस चलचित्रले सय करोडको आँकडा पार गरेको छ भने दोश्रो शुक्रबार ४.५०, शनिबार ६.५० र आइतबार […]
Posted in कला/साहित्य,मनोरञ्जन | Read More »
कुञ्जनाले ‘आई लभ यु …’ पललाई भनेसी ता सक्कसी’गो नि
दिनेश थपलियाको गिती एल्बम ‘सारांश–२’ लिएर आएका छन् । उनको एल्बममा समावेश रहेको ‘आई लभ यु…’ मा उनले कुञ्जना घिमिरे र पल शाहलाई समावेश गरेका छन् । उक्त गीतमा कुञ्जनाले ‘आई लभ यु …’ पललाई भनेपछि उनी पनि के कम्ती ‘आई लभ यु… ’ त फकाउनै प¥यो कि कसो ! कुञ्जना र पलले यस गीतमा […]
मुम्बई । बलिउडमा निकै चर्चा कमाएको जोडी रणवीर कपुर र कट्रिना कैफको सम्बन्ध चिस्सिएको छ । एकताका निकै चर्चा कमाएको यो जोडी मगनीसमेत गरीकन सम्बन्ध चिस्सिएको हो । रणबीर कट्रिनाको ब्रेकअप कसरी भयो भन्ने समाचारले अहिले बजार तताएको छ । उनीहरुको ब्रेकअप कसरी र किन भयो ? स्पटब्वाय पत्रिकाले आलिया भट्टको कारण रणबीर कट्रिनाको ब्रेकअप […]
नयाँ शक्तिमा नायिका करिष्मादेखि पूर्व एआईजीसम्मको संलग्न
काठमाडौ, माघ १० । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति अभियानमा नायिका करिष्मा मानन्धरदेखि पूर्वएआईजी गणेश राईसम्मको संलग्नता रहने भएको छ । आगामी वैशाखमा पार्टीले राष्ट्रिय परिषदको घोषणाको तयारी गरिरहेका बेला आइतबार भट्टराईले विभिन्न पार्टीबाट आएका तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई समेटेर नयाँ शक्ति निर्माण अभियान राष्ट्रिय परिषद् घोषणा गर्दैछन् । भट्टराईले एक पत्रकार […]
ऋतिकको जन्मदिनमा उनका बुबाले दिए नौलो उपहार
१४ माघ, एजेन्सी । बलिउड अभिनेता ऋतिक रोशन आइतबारबाट ४२ वर्ष लागेका छन् । सुजैन खानसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट छुट्टिएर बसेका ऋतिकलाई उनका बुबा राकेश रोसनका तर्फबाट जन्मदिनमा नौलो उपहार मिलेको छ । त्यो हो, राकेशले छोरा ऋतिक र आदित्यको दुश्मनी तोडिदिएर ऋतिकलाई यशराजको फिल्मसमेत दिलाइदिएका छन् । केही समयअघि ऋतिकले भारतको ठूलो ब्यानरमध्येको एक यशराज […]
‘कसैलाई नभन्नु’ तयार
१२, पौष . ‘अन्तरजातीय म्युजिकल लभस्टोरी’ कथा मानिसएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘कसैलाई नभन्नु’ निर्माण भएको छ । अन्तरजातीय प्रेमकथामा आधारित यस चलचित्र सर्जु लामिछानेको प्रस्तुतीमा निर्माण भको हो । शिवहरि रेग्मी निर्माता रहेको यस चलचित्र आगामी माघ २२ गतेबाट देशव्यापी रुपमा रिलिज हुँदैछ । चलचित्र प्रदर्शनका लागि तयारी भएको र अब युनिट चलचित्रकोे प्रमोसनमा जुटेका […]